Posted by Tranquillus | Jan 20, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Mushaharka mushaharka, oo sidoo kale loo yaqaan garnamaynta dakhliga. Ma tahay nidaam u oggolaanaya deyn bixiyuhu inuu helo lacag uu ku leeyahay iyada oo si toos ah looga jaro mushaharka deynta. Hawlgalladaan waxaa lagu fuliyaa faragelinta sarkaal garsoor. Midkani wuxuu haysan doonaa asaga oo gacanta ku haya dhammaan dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah inuu shaqeeyo. Mushahar bixinta ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah dariiqooyinka ugu wanaagsan ee deyn bixiye, ganacsi ama xitaa shaqsi gaar ah uu ku soo ceshado lacagaha lagu leeyahay. Qodobkaan, ku ogow waxa aad u baahan tahay inaad sameyso si aad ugu tartanto musharka mushaharka.
Nidaamka la raacayo
Xusuusin ahaan, waa suurtagal in la bilaabo khilaaf kahor inta aan la marin mushahar bixinta. Xaqiiqdii, habraacyada sharcigu soo rogay lagama yaabo in la raaco. Tusaale ahaan, waxaan isku dayi karnaa inaan kaa qaadno qaddar si weyn uga sarreysa miisaanka sharciga iyadoo maqnaanshaha cinwaan kasta oo la fulin karo yahay.
Xaqiijinta joogitaanka cinwaan la fulin karo
Keli miis fadhiya oo leh cinwaan la fulin karo ayaa la wareegi kara mushaharka. Tan waxaa bixiya garsooraha fulinta ee maxkamada garsoorka ama nootaayo mas'uul ka ah deynta su'aasha. Markaa waxaad xaq u leedahay inaad ka codsato nuqul ka mid ah warqadda fulinta oo ka socota Namsmanka mas'uulka ka ah kiiska.
Xaqiijinta waqtiga kama dambaysta ah ee sharciga ah
Laga soo bilaabo marka deyn bixiyuhu uu racfaan u qaato garsooraha, kan dambe waa inuu kuu soo diro yeeritaan, ugu yaraan 15 maalmood ka hor dhageysiga heshiisiinta.
La soco in dhageysiga heshiisiinta ay qasab tahay in la qabto ka hor nidaamka habsami uqabashada. Marka ay dhacdo, karraaniga waa inuu daqiiqadaha qaataa. Tani waa inay ku jirtaa waajibaadka iyo ballanqaadyada kala duwan ee aad ku leedahay deynta. Dhamaadka dhageysiga, garsooraha ayaa bixin kara xukun u oggolaanaya in si toos ah gacanta loogu dhigo dakhligaaga.
Haddii bixinta mushaharkaaga uu bixiyo garsooraha, karraaniga maxkamadda ayaa markaa looga baahan doonaa inuu ku wargeliyo loo-shaqeeyahaaga meeriska xiga. Daloolka feedhu wuxuu caadi ahaan dhacayaa siddeed maalmood gudahood marka uu dhammaado muddada rafcaanka.
Xaqiijinta u hogaansanaanta miisaanka sharciga
Waxaad ubaahantahay inaad xakameyso qadarka lacagta garnishalka ah ee mushaarkaaga. Tan waxaa lagu xisaabinayaa dakhligaaga saafiga ah 12-kii bilood ee la soo dhaafay. Xaqiijin ahaan, waxaa muhiim ah in la isu geeyo 12-ka mushahar ee ugu dambeeya iyo in lagu daro mushaaraadka saafiga ah. Waxa kaliya oo hadhsan in la isbarbardhigo aasaaska xisaabinta ee ku hawlan bixinta mushaharka.
Waa lagama maarmaan in la hubiyo in miisaanka la ixtiraamay. Xaqiiqdii, mushahar bixinta mushaharku waa inaysan sinnaba uga badnaan wadarta ugu sarreysa iyo billaha la qaadan karo.
Tartanka mushahar bixinta
Kadib markaad hubiso qodobadii hore, hadaad nasiib leedahay, waxaad la kulmi kartaa wax aan caadi ahayn. Xaaladdan oo kale, waxaad isla markiiba ka doodi kartaa xaddiga mushaharka mushaharka garsooraha maxkamadda.
Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad si toos ah uga tartamayso debitka tooska ah. Tan awgeed, waa inaad soo ururisaa dhammaan caddaymaha aad haysato: nuqul ka mid ah jawaabta miis fadhiya ee qeexaya maqnaanshaha cinwaan la fulin karo, nuqul ka mid ah waraaqaha taariikheed ee la soo diray oo muujinaya sida aan loogu hoggaansamin nidaamka, dukumiintiyada caddaynaya u hoggaansamida miisaanka codsatay, iwm Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ballan ka samaysato karraaniga maxkamadda.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale fursad u leedahay inaad u xilsaarto dhinac saddexaad oo maareeya muranka mushaharkaaga mushaharka. Wakiilkani wuxuu noqon karaa wariye ama qareen. Kaliya waa inaad u dirtaa isaga dhammaan caddaymaha.
Xusuusnow in muranka qabashada mushaharka ay tahay in lagu diro warqad diiwaangashan oo leh aqoonsiga rasiidka.
Waa kuwan tusaalayaasha 2 ee waraaqaha si looga doodo mushaharka mushaharka.
Tusaalaha 1: muranka mushahar bixinta
Ujeeddo: Muranka ka dhalashada mushaharka LRAR
Kadib qabashadaydii ugu horaysay ee mushaharkayga (taariikhda qabashada), waxaan jeclaan lahaa inaan halkan kugula socodsiiyo. In aan qaaday talaabo sharci ah si aan uga horyimaado go'aankan sharci darada ah.
Xaqiiqdii (sharax sababaha kugu riixaya inaad tartanto). Waxaan ka dhigayaa dhammaan dukumiintiyada taageeraya ee rasmiga ah ee aan haysto inay idin heli karaan.
Iyada oo ay soo wajahday tan (nidaam darrida nidaamka ama qaladka lagu xusay), waxaan ku weydiin lahaa inaad joojiso qaadista shaybaarka.
Adiga oo kaaga mahadcelinaya dadaalkaaga, fadlan aqbal, Marwo, Mudane, salaanteyda ugu daacadsan.
DOkumentigaga bilaash ugu yeel boggayaga
Tusaalaha 2: muranka mushahar bixinta
Ujeeddo: Tartan u dhexeeya mushahar ka qaadista mushaharka-LRAR
Tan iyo (taariikhda bilowga suuxdinta) iyo sida ay qabanqaabisay maxkamaddu, shaqaaleeyahaagu wuxuu iga joojiyay cadadka (isugeyn) mushaharkeyga bil kasta. Lacag bixintan billaha ah waxaa loo sameeyay dib u bixinta deynta iyadoo la fiirinayo (Magaca iyo magaca koowaad ee deynta).
Si kastaba ha noqotee, waxaan helay taas (sharaxaad ka bixi sababaha aad uga hortageyso mushaharka mushaharka).
Waxaan kuu soo dirayaa dukumiintiyada taageeraya ee cadeynaya sharcinimada racfaankeyga. Waxaan filayaa inay ku qancin doonaan oo aad aqbali doontid inaad tixgeliso.
Tani waa sababta aan sharaf ugu leeyahay inaan kaa codsado inaad sameyso waxa lagama maarmaanka u ah in sida ugu dhaqsaha badan loo qaabeeyo xaalada. Inta aan sugayo jawaabta aan rajeynayo in aan kaa helo, marwo, Mudane, muujinta salaanteyda ugu fiican.
Haddii aad shaki ka qabto xuquuqdaada, waxaad mar walba talo ka raadin kartaa khabiir. Wuxuu ku siin doonaa sharaxaad dheeri ah iyadoo kuxiran kiiskaaga. Tani waxay kaa dhigi doontaa habraacyada in badan ay kuu cadayn doonaan. Intaa waxaa dheer, kiiskaagu wuxuu noqon karaa mid gaar ah. Raadinta caawimaadda xirfadle xirfadle ah ayaa kaa caawin kara inaad kordhiso kala-duwanaanta dhinacaaga.
Download "Tusaale-1-tartame-dune-garnishment-sur-wages.docx"	Tusaale-1-tartan-dune-seizure-sur-wages.docx - La soo degsaday 3171 jeer - 15 KB
Download "Tusaale-2-tartame-dune-garnishment-sur-wages.docx"	Tusaale-2-tartan-dune-seizure-sur-wages.docx - La soo degsaday 3100 jeer - 15 KB
Warqad Muunad ah si looga tartamo mushahar bixinta Juun 5th, 2022Tranquillus
hore2021 gunno tababar
socdaMiyaan xaq u leeyahay in aan yareeyo tirada maalmaha fasaxa mushaharka la qaatay sababtoo ah saacadaha aan ka shaqeynaynin qaybta waxqabadka?